Al-Shabaab ayaa mar kale uga baaqay shacabka Muqdisho inay ka fogaadaan xarumaha dowladda iyo saldhigyada AMISOM. – idalenews.com
Al-Shabaab ayaa mar kale uga baaqay shacabka Muqdisho inay ka fogaadaan xarumaha dowladda iyo saldhigyada AMISOM.
Al-Shabaab ayaa mar kale uga baaqay shacabka Muqdisho inay ka fogaadaan xarumaha dowladda iyo saldhigyada AMISOM, iyagoo ku hanjabay inay meel walba ay ku beegsan doonaan.
Wakiilka Al-Shabaab ee Gobolka Banaadir Sheekh Cali Maxamed Xuseen ayaa sheegay in meel walba ay ku ugaarsan doonaan Cadawga, isagoo u jeediyay shacabka inay ka cararaan baabuurta meelaha ay taagan yihiin iyo xarumahooda.
“Meel walba uga carara baabuurtooda, xarumahooda ha tagina, sida saldhigyadooda, waxa ay ku sheegaan wasaaradaha, hadii ay Maxkamadooda tahay, meel kasta waa ku weerareynaa yuusan dhiigiina macno daro ku daadan”ayuu yiri Sheekh Cali Maxamed Xuseen.
Waxaa uu sheegay in weeraro habeenadii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Muqdisho ay qasaare ku gaarsiiyeen, isagoo tilmaamay in magaalada Muqdisho aanay isu gudbi karin magaalada habeen iyo maalin.
Mar uu soo hadal qaaday ciidamada la soo kordhinayo ee AMISOM ka socda ayuu sheegay inay qasaare u geysan doonaan si la mid ah kuwa hada dalka jooga, waxaana uu carabka ku dhiftay in cadawga banaanka uga soo baxay dhufeysyadii uu ku jiray, taasna ay u sahleyso inay qasaare ballaaran gaarsiiyaan.
Hadalkan ka soo yeeray Wakiilka Al-Shabaab ee Gobolka Banaadir ayaa ku soo aadaya, iyadoo Al-Shabaab mudooyinkii u dambeeyay weeraro ka geysaneysay magaalada Muqdisho, waxaana weeraradaas ka mid ahaa weerarkii Maxkamada Gobolka Banaadir ee bishii April ee sanadkan iyo weerarkii 19-kii June ay ku qaadeen Xarunta Qaramada Midoobey.
Dowlada China oo Ammaanka ka taagyeeraysa Dowlada Soomaaliya.